Nagu saabsan - Fangda Baakadaha Co., Ltd.
Baakadaha Fangda, oo la aasaasay 2003, waa soosaarahii ugu horreeyay ee Baakadaha Liistada Baakadaha isku-dhejiska ah ee Shiinaha, maantana waxaan noqonnay soo saaraha iyo dhoofiyaha hoggaaminaya Aasiya-Baasifiga.
Alaabtayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah baqshadaha liistada Baakadaha, Boorsooyinka Warqadaha (Boostaha Poly), Kuwa Xaragada Xayawaanka, Calaamadaha Tooska ah ee Tooska ah, Calaamadaha Kala-wareejinta Kulaylka iyo Waraaqaha Xaraaradda.
Warshadda cusub ee la casriyeeyay oo leh in ka badan 60000 mitir murabac ah, ku dhowaad 500 oo shaqaale ah ayaa halkan ka shaqeeya. Fangda waxay haysataa in kabadan 100 nooc oo mashiinno ah iyo tas-hiilaadyo ay ka mid yihiin kuwa wax soo saara PE, waraaqo sii daayo iyo dahaarka xabagta 、 rogayaasha 、 makiinadaha wax daabaca 、 slitters iyo noocyo buuxa oo ah xarumaha tijaabada shaybaarka, iwm.
Waxaan ogaanay isdhexgalka tooska ah ee dhammaan howlaha ku lug leh soo saarista wax soo saarkeena, sida wax soo saarka xarkaha, daabacaadda waraaqda silikooniga ah, xarkaha koollada, filimka is-beddelka iyo beddelaadda. Dhamaan howlaha kor ku xusan waxaa lagu shaqeeyaa aqoon isweydaarsiyo u gaar ah taas oo ka dhigaysa maaraynta wax soo saarka, dhimista qiimaha iyo kormeerka QC si fudud.
Intaas waxaa sii dheer, Fangda waxay ku qalabeysan tahay shaybaar aad u horumarsan oo R&D ah iyo farsamo yaqaanno xirfadlayaal ah oo indhaha ku hayey alaabada cusub ee teknolojiyadda hal-abuurnimo iyo hal-abuurnimo. Illaa iyo hadda, shirkaddu waxay leedahay 5 shati abuuris iyo shahaado ISO9001; badeecada ayaa sidoo kale ka gudubtay imtixaanka REACH.
Qiimaha asaasiga ah ee FANGDA waa “Tayada waa nolosha shirkadda”. Laga soo bilaabo xulashada alaabta ceyriinka ah si alaabada loogu geeyo dekedda, nidaam kasta oo si adag loo kormeero waaxda Tayada Tayada. Isla mar ahaantaana, FANGDA waxay adeegsataa nidaamka ERP, OA, CRM si loo wanaajiyo waxtarka shaqada, loo yareeyo qashinka waraaqda, si loo xaqiijiyo xafiiska cagaaran.
Khibraddeena hodanka ah iyo xamaasadeena horumarinta macaamiisha adduunka oo dhan waxay awood noo siineysaa inaan si deg deg ah oo xasiloon u korno. Xiriirkeena waxaa si weyn loo sii xoojin doonaa iyada oo loo marayo iskaashi guul-guul ah.